आज २०७६ फागुन १४ गते बुधबार तपाईको राशिफल कस्तो छ ? पढ्नुस – Jaljala Online
Posted on February 26, 2020 Author Jaljala Online	Comment(0)
आज २०७६ फागुन १४ गते बुधबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिष एस्ट्रो राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ-
फागुन ११ देखि १७ गतेसम्मको राशिअनुसारको साप्ताहिक भाग्यफल
२०७६ साल फागुन ११ देखि १७ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल । मेष -सुरुमा आम्दानी बढ्नुका साथै दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ गर्ने अवसर जुट्नेछ। व्यापारमा लाभांश बढ्नेछ भने उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुनेछ। मंगलवारदेखि अधिक रकम खर्च गर्नुपर्ने स्थिति आउनेछ। केही अप्ठ्यारा परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपर्ला। कामको बोझ पनि बढ्न सक्छ। आफन्तहरू टाढा हुनेछन्। तापनि शुक्रवारदेखि परिस्थिति अनुकूल हुनुका साथै प्रतिष्ठित काम गर्ने मौका प्राप्त हुनेछ। रमाइलो भेटघाट हुनेछ। साथ दिनेहरू प्रशस्तै फेला पर्नेछन्। मिहिनेतले विभिन्न अवसर दिलाउनेछ।
बृष -काममा साथ दिनेहरू प्रशस्तै भेटिनेछन्। विशिष्ट व्यक्तिसँग भेटघाट गर्ने अवसर जुट्नेछ। लगनशीलताले दाम, इनाम एवं प्रतिष्ठा दिलाउनेछ। सानो प्रयत्नले ठूलो काम बन्न सक्छ। व्यवसायबाटै आर्थिक स्थिति उकास्ने समय छ। तर मंगलवारदेखि खर्चसमेत बढ्नाले आर्थिक अभाव देखापर्नेछ। पछिका लागि गरिएको लगानीले भने फाइदै दिनेछ। पहिलेका योजनाहरू अधुरै रहनेछन्। सप्ताहान्तमा आफन्तजनबाट टाढिनुपर्ने हुन सक्छ। लाभांश बाहिरिए पनि विदेश ताक्नेहरूलाई भने यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
मिथुन -प्रारम्भमा व्यावहारिक कठिनाइ देखा पर्नाले चिताएको काम रोकिन सक्छ। स्वास्थ्यमा पनि कमजोरी अनुभूति हुनेछ। मंगलवारदेखि स्थितिमा सुधार आउनुका साथै कर्मयोगले उचाइमा पुर्याउनेछ। काम देखाएर उपलब्धि हातपार्ने समय छ। विशेष जिम्मेवारी वा नोकरी प्राप्त हुन सक्छ। विशिष्ट व्यक्तिसँग मित्रता बढ्नेछ। परिश्रमअनुसार राम्रै फल पाइनेछ। सप्ताहान्तमा मिहिनेतको प्रतिफल अरूले हत्याउने चेष्टा गर्नेछन्। शुभचिन्तकहरूलाई बेवास्ता गर्दा दु:ख पाइनेछ। आम्दानी भए पनि फजुल खर्च बढ्न सक्छ।
कर्कट -सुरुमा अस्वस्थताले कमजोर भएको अनुभूति हुनेछ। अध्ययनमा बाधा पुग्नेछ र वादविवादमा परिनेछ। मंगलबारदेखि भाग्यले विभिन्न अवसर जुराउनेछ र पहिलेको स्थितिमा सुधार समेत आउनेछ। बुद्धिको उपयोगले समस्या सुल्झाउन सफल भइनेछ। तर स्वास्थ्य र अर्थका हिसाबले समय कमजोर रहनेछ। अप्ठ्यारा चुनौतीसँग पनि सम्झौता गर्नुपर्ला। सप्ताहान्तमा सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुनेछ। सुखदुःखमा साथ दिनेहरू फेला पर्नेछन्। पदीय जिम्मेवारी प्राप्त हुनेछ। समुदायको हितमा राम्रै काम गर्न सकिनेछ।
सिंह -शुभचिन्तकहरूको सहयोगले साताको प्रारम्भ उत्साहवर्द्धक रहनेछ। विवादले समस्या निम्त्याए पनि रमाइलो यात्रा गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। प्रेमको बन्धन कसिनेछ भने घर-गृहस्थीमा मन रमाउनेछ। मंगलवारदेखि अरूका लागि रकम र समय खर्चनुपर्ला। स्वास्थ्यमा पनि कमजोरी देखापर्नेछ। तापनि समस्या दर्साउँदा सहयोगीहरूले साथ दिनेछन्। सप्ताहान्तमा स्थितिमा सुधार आउनेछ भने कर्मयोगले नयाँ मार्ग अवलम्बन गर्नेछ। मिहिनेत गर्दा पद-प्रतिष्ठा हातपार्न सफल भइनेछ। आँटेको काम सम्पादन हुनेछ।
कन्या -सुरुमा चुनौती पन्छाएर काम बनाउन सकिनेछ। मिहिनेतले अवसर दिलाउनेछ भने लगनशीलताले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ। विवाद तथा मुद्दाहरूमा पनि आफ्नो पक्ष बलियो रहनेछ। प्रतीक्षा गरिएको उपलब्धि प्राप्त हुनेछ। व्यापार बढ्नुका साथै व्यवसायमा लाभ हुनेछ। भौतिक साधन जुट्नाले आम्दानी बढ्ने काम प्रारम्भ हुनेछ। प्रेमको बन्धन कसिनेछ र आतिथ्यपूर्ण सत्कार पाइनेछ।सप्ताहान्तमा मालमत्ता हराउन सक्छन्। स्वास्थ्यबाधा र मनको डरले पनि सताउनेछ। सानो काममा अलमलिनुपर्दा अवसर गुम्न सक्छ।
तुला -प्रारम्भमा अध्ययन र स्वास्थ्यको चिन्ताले सताउन सक्छ। बलजफ्तीले काम बिग्रनेछ भने अर्थ अभावले समस्या उत्पन्न हुनेछ। अरूका लागि जुट्नुपरे पनि बिस्तारै फाइदा हुनेछ। मंगलवारदेखि व्यापार र उद्योगमा फाइदा हुनेछ। प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन्। मिहिनेतले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ। भौतिक साधन जुट्नाले सोख पूरा हुनेछ। अवसरले अध्ययनमा उत्साह जगाउनेछ। व्यवसायका लागि यात्रा सम्भावना छ। सुमधुर दाम्पत्यले प्रफुल्लित भइनेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिने समय छ।
बृश्चिक -सुरुमा आफन्तजन टाढिनाले परिस्थिति अलि प्रतिकूल रहला। काम बिग्रने भयले सताउन सक्छ। शुभचिन्तकहरूको सुझावलाई मनन गर्नुहोला। स्वास्थ्य कमजोर रहनाले अध्ययनमा ध्यान केन्द्रित नहुन सक्छ। प्रतीक्षित नतिजा पनि कमजोर हुने देखिन्छ। बिहीवारसम्म केही व्यवधान भए पनि सप्ताहान्तमा सुखद समाचारले उत्साह जगाउनेछ। पहिले प्रतिस्पर्धा गर्नेहरू सहयोगीका रूपमा देखा पर्नेछन्। व्यवसायका लागि यात्रा गर्ने साइत जुर्नेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिलो हुनेछ। मिहिनेतले प्रतिष्ठा दिलाउनेछ।
धनु -प्रारम्भमा विशेष अवसर जुट्नाले राम्रो उपलब्धि प्राप्त हुनेछ। मिहिनेतले सजिलै उचाइमा पुर्याउन सक्छ। पुरुषार्थी काम गर्दै मनग्य दाम समाउने सौभाग्य समेत प्राप्त हुनेछ। दिगो काम शुभारम्भ हुन सक्छ। मंगलवारपछि पारिवारिक समस्या उब्जनाले काममा बाधा पुग्नेछ। साइनो गाँस्नेहरूले अनावश्यक दु:ख दिनेछन्। आश्वासन बाँड्नेहरूले कुरा बदल्न सक्छन्, समयमै सजगहोला। सप्ताहान्तमा भने आफ्नै प्रयासले काम बन्नेछ। अध्ययनमा राम्रो नतिजा हासिल गर्न सकिनेछ। बुद्धिको उपयोगले लक्ष्य प्राप्ति हुनेछ।
मकर -धेरै बोल्ने बानीले वादविवाद निम्त्याउला। असमझदारीले पहिलेको सम्झौता टुंग्याउन सक्छ। कुरा लगाउनेहरूले सम्बन्धमा फाटो उत्पन्न गर्न सक्छन्। मंगलवारदेखि शुभचिन्तकहरूको साथ जुट्नाले काममा फाइदा हुनेछ। मिहिनेतले प्रतिष्ठित काम गर्ने अवसर दिलाउनेछ। पराक्रम बढ्नेछ। काममा भने बलभन्दा बुद्धिको उपयोगले लाभ उठाउन सफल भइनेछ। सप्ताहान्तमा सहयोगका नाममा धोका दिनेहरू सक्रिय रहनेछन्। घरेलु समस्यामा अलि सावधान रहनुहोला। आफन्तहरूको सहयोगले फाइदा दिलाउनेछ।
Posted on August 25, 2019 Author Jaljala Online
भदौ ८, काठमाडौं । पत्रकार शालि’कराम पुडा’सैनी मृत्यु प्रकरणमा मुछिएका टिभी प्रस्तोता रवि लामि’छानेविरुद्ध सरकारी वकिलले अभियोग पत्र दायर गर्ने तयारी गर्दैछ । स्रोतका अनुसार आइतबार ११ बजे अदालतमा मिसिल पेश गर्ने तयारी भएको छ । लामि’छानेविरुद्ध अभियोग पत्र दायर गरेसँगे भोलिदेखि नै सरकारी वकिल र लामि’छानेलगायतका वकिलबीच बहस सुरु हुनेछ । यदि भोलि बहस […]
कतार सरकारका यी निर्णयले नेपाली कामदारलाई भयो यस्ता फाइदा
असोज २३, काठमाडौं । कतार सरकारले आप्रवासी कामदारका पक्षमा गरेको निर्णयले नेपाली कामदारलाई फाइदा पुग्ने भएको छ। कतार सरकारले आप्रबासी कामदारका लागि मुख्य तीन निर्णय गरेको छ । तीन निर्णय कतारमा कार्यरत नेपालीको पक्षमा छन् । कतार सरकारले एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै सन्तानले स्पोन्सर परिवर्तन गर्न नपर्ने, अस्थायी कामदार ल्याउन पाउने तथा अनलाइन सेवामा २० […]